I-Csbio: Unikelwe ngaphezulu kwe-2 yezigidi ze-Yuan ye-Heparin yeyeza ukunceda ukuThintela kunye noThintelo loBhubhane |
Ukuvunywa kwemigaqo ye-FDFs
Ukuvunywa kolawulo lwe-API
Itsheyini lokuvelisa elipheleleyo
Enoxaparin Sodium In sindion
Inaliti yeNadroparin yeCalcium
Dalteparin Sodium In sindion
I-Csbio: Inikelwe ngaphezulu kwe-2 yezigidi ze-Yuan ye-Heparin yeyeza ukunceda ukuThintela kunye noThintelo lwezifo.
Iphepha leZokhuseleko laseShanghai laseTshayina News China Security Security News ngoFebruwari 27, Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co, Ltd. yanikela ngaphezulu kwe-2 yezigidi zeYuan kwiRed Cross Society yePhondo laseHubei. La machiza angamachiza e-heparin afuneka ngokungxamisekileyo kunyango lwezigulana ezinesifo sokunyuka kwemiphunga (corneary pneumonia) entsha. La machiza angentla azakusasazwa kwizibhedlele ezingama-42 eHubei kubandakanya iWuhan Jinyintan Hospital. Utshintsho lwezobuchwephetsha nguTshshan uthe ukubuyisela eluntwini kunye nokusasaza uthando luxanduva oluxabisekileyo lwentlalo kwiinkampani ezidwelisiweyo. Xa ujongene nobhubhane, i-Changshan Pharmaceutical ngokuqinisekileyo iya kusebenzisa izibonelelo zayo kwaye yenza konke okusemandleni ayo ukunqanda nokulawula ubhubhane.
Ngaphambi kwalonto, u-Changshan Pharmaceutical waqhagamshelana no rhulumente wengingqi nge-29 kaJanuwari kwaye wanikela nge-2 yezigidi ze-Yuan kwimali yokuthintela ubhubhane kunye nolawulo. Ukusukela kokuqalwa kwe-Corneary Pneumonia eNtsha, i-Changshan Pharmaceutical iye yaqinisa uxanduva lwayo kwaye yanyanzelisa ukubeka impilo nempilo yabantu kwindawo yokuqala. Sisebenza nzima ukuqinisekisa ukuhanjiswa okuqhelekileyo kwezitofu ze-heparin ze-heparin ezisezantsi kwiHubei nakwezinye iindawo. Kwimeko apho izinto zeholide kunye nomthamo weempahla zingakhange zibuyiswe, ingxaki yokuhamba isonjululwa ngaphandle kweendleko, kwaye ii-batch ezininzi ze-hepatin ezinesisindo esisezantsi ziye zathunyelwa eWuhan naseHubei ngeenxa zonke.
Njengokuphela kweshishini eliphambili lasekhaya kwintsimi yeherparin ene-heparin engacacanga kwiimveliso zesitofu seheparin kunye nomxokelelwano opheleleyo we-heparin, ukuthengiswa kwenaliti ye-heparin enesisindo esisezantsi eveliswe yi-Changshan Pharmaceutical ye-40% yemakethi yesizwe. Imveliso ephambili yesisindo se-heparin ye-calcium inaliti iye yadala imigangatho yemveliso ye-YBH03832006, ephezulu kakhulu kunakwimigangatho yesizwe neyomzi-mveliso, ekumgangatho wokuqala kwindawo yokuthengisa yasekhaya iminyaka elithoba ilandelelana.
Iyaqondwa into yokuba iintshukumo zesaTshshan Pharmaceutical zokuyenza ngenkuthalo imisebenzi yayo yezentlalo nokunceda ukuthintela nokulawula ubhubhane bafumene indumiso nenkxaso eluntwini. Iqabane le nkampani i-US ConjuChem yanikela ngeemaski ezingama-8,000 kule nkampani ukuze ixhase imveliso yale nkampani, kwaye amanye amahlakani nawo avakalise injongo yakhe yokunikela imaski. (Liu li)
Ixesha lokuposa: Jul-01-2020
I-Hebei Changshan i-Biochemical Pharmaceutical Co, Ltd.